सिरहा र धनुषामा लागूऔषधसहित तीन पक्राउ
२०७८ श्रावण ५, मंगलवार ०७:४६
जनकपुरधाम । पछिल्लो समय सिरहा र धनुषामा लागूऔषधको कारोबार बढेको छ । कोरोना महामारीका कारण सीमानाकामा सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेपनि लागूऔषधको कारोबार रोकिएको छैन् । सोमवार सिरहामा एक युवक लागूऔषध नाइट्रोभेटसहित पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेमा गोलबजार नगरपालिका ५ का २२ वर्षीय दुखी सिंह रहेका छन् ।
१२० पिस नाइट्रोभेटसहित उनलाई औरही गाउँपालिका १ दरहियाबाट प्रहरी चौकी हरकट्टीको टोलीले पक्राउ गरेको बताइएको छ । भारतीय बजारबाट सिंह ज.३ प. २६६६ नम्बरको मोटरसाइकल चढेर गोलबजार (घर)तर्फ गइरहेका थियो । शंका लागेर चेकजाँच गर्दा नाइट्रोभेट ट् याब्लेट बरामद भएपछि आवश्यक कारबाहीका लागि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका ५ दुधमति हनुमान चौकस्थित जनकपुर– ढल्केवर सडकबाट गाँजासहित एक महिला र एक युवक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा बटेश्वर गाउँपालिका २ का ३५ वर्षीय रामकुमार महतो र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका ५ की २१ वर्षीया रुबी कुमारी साह रहेको प्रहरीले जनाएको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरबाट खबर संकलनको लागी खटिएको प्रहरी जवान पन्चान्न महतोले दक्षिणबाट उतरतर्फ शंकास्पद तरिकाले आई रहेको ज.३ प. ५४९ नम्बरको मोटरसाईकललाई रोकी चेकजाँच गर्दा गाँजा बरामद भएपछि उनी दुबै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । प्
रहरीका अनुसार पक्राउ परेका दुबैजना मोटरसाईकलको बीचको भागमा चेपी राखेको आकाशे रङको भिर्ने झोलामा गाँजा राखेका थिए । बरामद भएको गाँजा ५ किलोग्राम रहेको छ । उनी दुबैजनामाथि प्रहरीले कारबाही अगाडी बढाएको जनाएको छ ।